Sanduuqyada Calaamadda Gaarka ah ee Shiinaha ee Khaaska ah Jumlada qalafsan 25mm Warshadda Indhashareerka Mink | Weiti
Khaanadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Khaaska ah Jumlada qalafsan 25mm Muraayadaha Mink
1, HELENA style 25mm karbaash mink bilaash ah
2, Customize style karbaash iyo baakadaha baalasha la heli karo
3, Super dabiici ah & khafiif ah
4, Karbaash waara oo aan la rumaysan karin
25MM BEERAHA BEENTA
Qiimaha tooska ah ee warshadda
100% dhogor mink oo lacag la’aan ah
Madow dabiici ah
Tayo sare iyo qiimo tartan
In ka badan 200000 lammaane awood
Khadka wax -soo -saarka oo dhammaystiran si loo ilaaliyo shixnadda degdegga ah
Habee qaabka karbaashka iyo baakadaha baalasha ee la heli karo
Gabi ahaanba arxan-laawe & madhalaysnimo, oo lagu helay adigoo si tartiib ah u cadaynaya xayawaanka nool, iyada oo aan waxyeello u geysan.
Made Gacan -ku -samays, caadadii loogu talagalay & indhashareer mink aad u gaar ah.
Natural Dabiici aad iyo aad u fudud.
Karbaashyo waara oo aan la rumaysan karin.
√ Ku dar soo -jiidasho deg -deg ah oo leh 100% minka indhaha.
Application Codsi fudud & dabacsanaan.
Iyada oo leh 100% Siberian Mink oo ah da'da ugu wanaagsan ee laga helo xayawaanka xorta ah oo dib loo warshadeeyo xilliyada daadinta, jeedalkeenu wuxuu bixiyaa xulashada ugu ballaaran ee Mink Lashes dhab ah. Adiga oo adeegsanaya darajada sare ee dhogorta mink, jeedalkeena mink -ga waa la tilmaamaa oo waa xarrago, haddana waa jilicsan yahay oo waa khiyaano. Waxaan bixinnaa karbaash, dherer, jeexjeexan iyo karbaash mink fur oo ku habboon oo lagama maarmaan u ah munaasabad kasta, sida qurxinta maalinlaha ah, xafladda, iwm.
Dhammaan noocyada kala duwan ee baakadaha baalasha indhaha ee ikhtiyaariga ah waa ikhtiyaari
Sanduuqa indha -indheynta iyo kiisaska indha -indheynta ayaa dhammaantood loo heli karaa si loogu habeeyo astaantaada gaarka ah daabacaadda UV UV. Wixii xirmo karbaashyo dheeri ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Kala fur xabagta ku dheggan baalasheeda iyada oo la isticmaalayo suuf + saliid nadiifin ah
Talooyin: Sug dhowr ilbidhiqsi si ay xabagta u milmaan.
Indhahaaga beenta ah si taxaddar leh uga fogee, laga bilaabo geeska dibadda. Haddii aad dareento iska caabin, fur koollada ka hor intaadan sii wadin adoo ku qooyay Q-caafiye ka-qaadis qurxiyo oo aan saliid ku dhisnayn kuna dabool kooxda aad ku dhibtoonayso inaad ka furto.
Ka nadiifi xabagta xad -dhaafka ah ee baalasha indhaha adigoo isticmaalaya suufka suufka + saliidda nadiifinta (ka -qaadista qurxinta bilaashka ah) oo ku rid keydinta nadiifta ah. Xusuusnow inaadan weligaa qoynin karbaashyadaada! Waxay qaadan karaan biyo yar, laakiin ha qarqin. Haddii karbaashyadaadu aad u qoyaan, waxaa laga yaabaa inay bilaabaan inay lumiyaan qaabkooda.
Hore: Calaamadda Gaarka ah Khaanadda Baakadaha Indhaha Beenta Jumlada 25mm 100% Indhaha Indhaha
Xiga: Baakadaha Indhaha ee Caadiga ah ee jilicsan Gacan -gacmeed 25mm 3d Mink Eyelash
25mm Mink Eyelash Vendor
25mm Mink Eyelas
jeedal been ah
Mink Baaritaanno Been ah
Indhashareerka Dhibicda Jumlada 100% Mink Thic ...
Shiinaha Factory Bulk 3d Eye jeedal Jumlada 25mm ...
Bulk Wispy Fluffy Strip Jeedal 25mm Real Mink E ...
Soo saaraha Indhaha ee Shiinaha Jilib Been Abuur ah ...
Daabacaadda Astaantaada Jumlada Mink Jumlada 5 ...
Kordhinta Indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, Jeexa indhaha, dibinta, jeedal mink, indho -dejiye,